यी हुन् गर्ल्स होस्टल भित्रका १० रहस्य, फूल मस्ती र फेसनको 'मकटेल' !
‘गर्ल्‍स होस्‍टल’ फूल मस्ती र फेसनको ‘मकटेल’ ! तपाईंलाई लाग्न सक्छ कस्तो होला त्यहाँको माहोल ? परिवारको नियन्त्रणबाट केही हदसम्म टाढा रहेका युवतीहरुको जमघटमा के होला ? यी यस्तै जिज्ञासा आममानिसमा पाउने गरिन्छ ।
यहाँ छ जवाफ, आज हामीले गर्ल्स होस्टल भित्रको १० रोचक कुराको चित्रण गरेका छौं ।
1. सेल्‍फी टाइम: सेल्‍फी खिच्नु गर्ल्‍स होस्‍टलमा बस्ने युवतीहरुको टाईमपासको एउटै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । कहिले सिं‌गल त कहिले ग्रुपमा बसेर सेल्फी खिच्ने क्रम निरन्तर चलि नै रहेको हुन्छ । फोटो खिच्ने, राम्रोलाई राख्ने र चित्त नबुझेकालाई डिलिट गर्ने काम दिनदिनै हुन्छ ।
2. इमोशनल साथ: घरबाट टाढा रहेका युवतीहरुले सबैभन्दा इमोशनल सपोर्ट रुममेटबाट नै पाउँछन् । आफ्नो रुम पार्टनर लभमा पर्दा वा ब्रेकअप हुँदा उनीहरुले राम्रैसँग साथ दिन्छन् । यस्तोबेलामा लभमा हुँदा साथ दिने र ब्रेकअपमा सम्झाउने प्रेम दर्शन सबैलाई कण्ठस्तै हुन्छ ।
3. एक्‍सरसाइज सेशन: होस्टलमा बस्ने युवतीहरु दैनिकजसो एक अर्कालाई हेरेर दुब्लाउने वा मोटाउनेजस्ता विषयमा छलफल गरिरहन्छन् । यस्तैमा कसैले एक्सरसाईजको कुरा गर्यो भने ऊ त ठाउँको ठाउँ योग गुरु भइहाल्ने ! सबैभन्दा रोचक कुरा त के भने फिगर बनाउने सारा प्लानिङ एकहप्ता पछि त गफमामात्रै सिमित हुन्छ ।
4. मेसको खाना: हरेक दिन गर्ल्स होस्टलमा खानाको विषय चर्चामा नै रहन्छ । कहिले दालमा पानी कम त कहिले साग बोइल्ड हुनु हरकोहीका लागि चासोको विषय हुन्छ ।
5. फोनमा कुराकानी: गर्ल्स होस्टलको निकै रोचक पक्ष यो हो । होस्टलका हरेक कुनाकाप्चामा कोही न कोही फोनमा झुण्डिरहेको देख्न सकिन्छ । कतिपय कुराकानी त यति लामो हुन्छ कि रातमा सुरु भएको गफ बिहानैसम्म पनि चल्छ । प्राय लभमा परेका युवतीहरु रुम पार्टनरको अघि शेयर नभएका कुराहरु कुनै कुनाकाप्चामा गएर गर्छन् । यसरी सबैले एकान्त खोज्दा कुनाकाप्चा र खाली ठाउँ कुनै बाँकी रहँदैन ।
6. अनलाइन सपिङ: अनलाईन सपिङको क्रेज पछिल्लो समय गर्ल्स होस्टलहरुमा बढ्दो छ । यसैक्रममा कसैले कुनै सामानको अनलाईन सेल चलेको कुरा सुनायो भने सबै तुरुन्तै ल्यापटप खोलेर एउटै साईटमा पुग्छन्, त्यसपछि धमाधम बुकिङ सुरु ।
7. कपडा एक्सचेन्ज: हरेक दिन बिहान प्राय: युवतीहरु होस्टलबाट निस्किनु अघि १० मिनेट सोच्छन् आज के लगाउने ? आफूसँग कुनै नयाँ विकल्प उपलब्ध नभएमा उनीहरु साथीसँग ड्रेस एक्सचेन्ज गरेर भनेपनि पनि लगाउँछन् । दैनिकजसो फरक-फरक ड्रेसमा निस्किने सोख उनीहरुमा हुन्छ ।
8. कोठाको सजावट: होस्टलका कोठाहरु त्यहाँ बस्ने युवतीहरुले यसरी सिंगार्छन् कि, मानौं जिन्दगीभर यहीँ बस्ने हो । यस्तो सजावटमा फ्यामिली र फ्रेण्डहरुको फोटो हुनु निकै कमन कुरा हो ।
9. डान्स र मोडलिङ सेसन: सबैलाई मिस वर्ल्डको ताज नमिलेको किन नहोस्, तर होस्टलभित्र कोही पनि एेश्वर्या रायाभन्दा कम्ति हुँदैन । मोडलिङ र डान्स सेसन गर्ल्स होस्टलको सबैभन्दा रोचक पक्ष हो । प्राय युवतीहरु खानापछि जम्मा हुन्छन् र हल्लाख्ला गरेर कोही नाच्ने, कोही गाउने र कोही मोडलिङ गर्ने जस्ता गतिविधी गर्न थाल्छन् ।
10. क्याट फाइट: भनिन्छ, केटीहरु जति धेरै मिल्छन्, दुस्मनी पनि उति नै कडा हुन्छ । एक पटक झगडा पर्यो भने लाईफभर उसलाई दुस्मन सोच्ने र उसको हरेक कुरामा आपत्ति जनाउने खेल यहाँ हुनेगर्छ ।
नोट: यी तथ्यहरुमा विश्वभरका समग्र गर्ल्स होस्टलमा हुने गतिविधी समेटिएकाले नेपालका सन्दर्भमा कुनै मेल नखान पनि सक्छ । तर, प्राय भने मिल्दछ ।